Roomlọ dị ọcha ikuku na-ejikwa otu ndị nrụpụta - China ụlọ dị ọcha ikuku na-ejikwa otu ụlọ ọrụ & ndị na-eweta ya
Ndị na-ehichapụ ikuku na Disinfec ...
N'Ọnụ Glass ajị Sanwichi P ...
Modular Air-mma Pịgharịa C ...
CVE Series adịgide Igwe Ọdụdọ ...
Ngwongwo ikuku na-arụ ọrụ n'akụkụ ụlọ elu na-ajụ oyi na oyi iji kesaa ma kwado ikuku site na usoro nke kpo oku, ikuku, na obi jụrụ ma ọ bụ ntụ oyi. Onye na-ekpuchi ikuku na mpaghara azụmahịa bụ nnukwu igbe nke nwere ihe na-ekpo ọkụ na ihe dị jụụ, onye na-afụ ọkụ, racks, ụlọ, na akụkụ ndị ọzọ na-enyere onye na-ahụ maka ikuku aka ịrụ ọrụ ya. Ejiri ikuku na-arụ ọrụ na eriri mmiri na ikuku na-esi na nhazi ikuku na-arụ ọrụ ahụ, wee ...
Dehumidification Airdị Ikuku Ijikwa Ikuku
Dehumidification Type Air Ijikwa Units High arụmọrụ na ntụkwasị obi: Kpamkpam onwe ẹdude unit na siri ike igwe anaghị agba nchara na abụọ akpụkpọ ewu… CNC chepụtara na ulo oru ọkwa mkpuchi, mpụga akpụkpọ MS ntụ ntụ ntekwasa, esịtidem akpụkpọ GI..for pụrụ iche ngwa dị ka nri na-emepụta ọgwụ, na akpụkpọ ahụ dị n'ime nwere ike ịbụ SS. Ike iwepụ ikike dị elu. Ihe nzacha siri ike nke EU-3 na-ekpuchi ihie ikuku. Otutu nhọrọ nke reactivation okpomọkụ iyi: -electrical, steam, thermic flui ...